Dzimwe nguva zvinoita sekunge isu tanga tichimhanya neGoogle nharembozha OS pane edu eApple zvishandiso zvachose. Nekudaro, zvave kungopfuura makore gumi kubva yekutanga yepamutemo Android foni yakarova masherufu. Sarudzo yakakosha munhoroondo yeApple kwaive kuzvipira kweGoogle kuita Android yakavhurika-sosi inoshanda sisitimu. Izvo zvakabvumidza iyo kuti ive inonyanyo kufarirwa nevatatu-bato foni vanogadzira. Makore mashoma mushure mekutanga kweiyo Android 1.0, mafoni emafoni anofambiswa neiyo nyowani OS aive kwese kwese.
Makore gumi nemaviri gare gare, isu tiri kupemberera kuvhurwa kwe Android 11. Iyo OS yave yave inonyanya kufarirwa nharembozha inoshanda sisitimu pasirese, ichikunda vakwikwidzi vayo vazhinji senge Symbian, BlackBerry, Palm OS, webOS, uye Windows Runhare. Apple yeApple ndiyo yega chikuva ichakamira semukwikwidzi wakakomba kuApple, uye mamiriro iwayo haataridzike senge achachinja chero nguva munguva pfupi.
Ngatitarisei nhoroondo yeiyo Android OS.
Read more: Ese evha Easter yai uye maitiro ekuiwana
Kutanga kwe Android
Nhoroondo yeAroid inotanga munaGumiguru 2003 - kunyangwe izwi rekuti smartphone raive richishandiswa zvakanyanya uye makore akati wandei Apple isati yazivisa yayo yekutanga iPhone uye iOS. Android Inc yakavambwa muPalo Alto, California. Vavambi vayo vana vaive Rich Miner, Nick Sears, Chris White, naAndy Rubin. Panguva iyoyo, Rubin akambotaurwa achiti Android Inc yaizogadzira "nhare mbozha dzakangwara dzinoziva nzvimbo yemuridzi wayo nezvaanofarira."
Rubin yakaratidzwa mu 2013 kutaura muTokyo iyo Android OS pakutanga yairehwa kugadzirisa masisitimu anoshanda emakera edhijitari. Asi kunyangwe panguva iyoyo, musika wema-wega-digital makamera wanga uchiderera. Kwangori mwedzi mishoma gare gare, Android Inc yakafunga kuendesa magiya kuenda kunoshandisa iyo OS mukati memafoni.
Google yakatenga Android muna 2005 uye zvese zvakachinja.
Muna 2005, chitsauko chikuru chinotevera munhoroondo yeAroid chakatanga pakatanga kambani inowanikwa neGoogle. Rubin nedzimwe nhengo dzekutanga dzakaramba dzichienderera mberi nekuvandudza OS iri pasi pevaridzi vayo vatsva. Sarudzo yakaitwa kushandisa Linux sehwaro hweiyo Android OS. Izvi zvaireva kuti mashandiro aigona kupihwa kune vatatu-bato mbozhanhare vagadziri mahara. Google neboka reApple vakanzwa kuti kambani inogona kuita mari ichipa mamwe masevhisi anoshandisa OS, kusanganisira maapp.
Rubin akasara kuGoogle semusoro weboka reAroid kusvika 2013, apo kambani yeMountain View yakazivisa kuti achasiya chikamu. Mukupera kwegore ra2014, Rubin akasiya Google zvachose ndokutanga bhizinesi rekutanga incubator asati apedzisira adzokera kubhizinesi re smartphone ne zvakaipa-fated Zvakakosha muna 2017.
Iyo Android logo
Ikozvino inozivikanwa logo yeiyo Android OS, iyo inoita senge kusanganiswa kwerobhoti uye girini yegirini, yakagadzirwa naIrina Blok apo iye aishandiswa neGoogle. Blok akataura kuti rairo chete raakapihwa nekambani dhizaini kuGoogle yaive yekuita kuti logo iratidzike serobhoti. Blok akataura zvakare kuti dhizaini yekupedzisira yeiyo Android mascot yakafemerwa muchidimbu nekutarisa kune anozivikanwa echimbuzi marogo anomiririra "Varume" uye "Vakadzi."
Chinhu chimwe chakasarudzwa naBlok neGoogle kwaive kuita iyo Android robhoti pachayo ive yakavhurika-sosi purojekiti. Inenge imwe neimwe hombe kambani inodzivirira yakadaro logo kana mascot kubva pakugadziriswazve uye kushandiswa nevamwe. Nekudaro, iyo Android robhoti ikozvino yagadziriswa uye inoshandiswa nematani evanhu, zvese nekuti Google inobvumidza shanduko dzakadai pasi peCreative Commons 3.0 Attribution License.
Iyo Android mascot - inozivikanwawo sekuti "Andy" - yakadzokororwa padivi peyakawandisa yekumaka Android mu2019.Andy anogona kunge akarasikirwa nemuviri wake, asi chimiro chitsva chave kuwanikwa kwese kwese pamazita eApple.
Kuvhurwa kwe Android 1.0
Muna 2007, Apple yakatanga iyo iPhone yekutanga uye yakatangisa munguva nyowani mukombuta komputa. Panguva iyoyo, Google yanga ichiri kushanda paApple muchivande, asi munaNovember wegore iro, kambani zvishoma nezvishoma yakatanga kuburitsa hurongwa hwayo hwekukwikwidza neApple nemamwe mapuratifomu enhare. Mukuvandudza kukuru, Google yakatungamira kuumbwa kweiyo yainzi Open Handset Alliance. Yaisanganisira vanogadzira mafoni vakaita seHTC uye Motorola, vagadziri vechipu vakaita seQualcomm neTexas Instruments, uye vatakuri vanosanganisira T-Mobile.
Ipapo Sachigaro weGoogle uye CEO Eric Schmidt akataurwa achiti, "Chiziviso chanhasi chine mukurumbira kupfuura chero" Google Runhare "imwe chete iyo vatori venhau vanga vachifungidzira pamusoro pemavhiki mashoma apfuura. Chiono chedu ndechekuti chikuva chine simba chatiri kuburitsa chinopa simba zviuru zvemhando dzakasiyana dzenhare. ”
Iyo yeruzhinji beta yeiyo Android vhezheni 1.0 yakatangwa kune vanogadzira munaNovember 5, 2007.
Iyo T-Mobile G1 / HTC Kurota
MunaGunyana 2008, yekutanga Android smartphone yakaziviswa: iyo T-Mobile G1, inozivikanwawo seHTC Dream mune mamwe mativi epasi. Yakaramba ichitengeswa kuUS muna Gumiguru wegore iro. Iyo foni, iine pop-up yayo 3.2-inch touchscreen yakasanganiswa neQWERTY chaiyo khibhodi yakanga isiri chaiyo dhizaini yekugadzira. Chokwadi, iyo T-Mobile G1 yakawana ongororo dzakaipa kubva kumatekinoroji zvinoburitswa. Mudziyo wacho hauna kana uine 3.5mm headphone jack yakajairika iyo, kusiyana nanhasi, yaive yakanyanya kuita de facto foni foni pakati pemakwikwi eApple.
Nekudaro, iyo Android 1.0 OS mukati yaive iine zviratidzo zvekuronga zveGoogle chirongwa cheOS. Iyo yakabatanidza huwandu hwezvimwe zvigadzirwa zvekambani nemasevhisi, kusanganisira Google Mepu, YouTube, uye HTML browser (pre-Chrome) iyo, chokwadika, yaishandisa masevhisi eGoogle ekutsvaga. Yaivewo neiyo yekutanga vhezheni yeAndroid Market, chitoro cheapp chakataurwa neGoogle zvinodadisa chingadai chiine, "gumi nemaviri akasarudzika, ekutanga-e-e-mhando Android zvinoshandiswa." Zvese izvi zvinhu zvinonzwika sezvakanaka chinyakare izvozvi, asi ichi chaingova kutanga kwekukwira kweApple mumusika wefoni nhare.
Android nhoroondo: Ese makuru OS shanduro kusvika ikozvino
Android 1.5 Mukeke
Yekutanga yeruzhinji codename yeApple haina kuoneka kusvika vhezheni 1.5 Mukeke yakaburitswa muna Kubvumbi 2009. Chikwereti chekutumidza mazita eApple mushure mekutapira zviwitsi uye madhishi zvakagara zvamboenda kumaneja weprojekiti kuGoogle, Ryan Gibson. Nekudaro, zvikonzero zvake zvekushandisa musangano wezita wakadai hazvizivikanwe.
Cupcake yakawedzera akati wandei maficha nyowani uye kugadzirisa zvichienzaniswa neshanduro mbiri dzekutanga dzeveruzhinji. Izvi zvinosanganisira zvinhu zvatava kutora sekurerutsa, sekukwanisa kurodha mavhidhiyo kuYouTube, nzira yemafoni 'ekuratidzira kuti achinje otomatiki, uye rutsigiro rwechitatu-bato mamaki.
Dzimwe dzenhare dzakaburitswa Cupcake yakaiswa kunze kwebhokisi yaisanganisira iyo kutanga Samsung Galaxy foni, pamwe neHTC Hero.
Google yakakurumidza kuvhura Android 1.6 Donut munaGunyana 2009. Iyo itsva OS ikozvino yakapa rutsigiro rwevatakuri vachishandisa CDMA-based network. Izvi zvakabvumira nhare dzeApple kutengeswa nevatakuri vese pasirese.
Zvimwe zvinhu zvaisanganisira kuiswa kweKurumidza Kutsvaga Bhokisi, uye nekukurumidza kumhanya pakati peKamera, Camcorder, uye Garari kugadzirisa ruzivo rwevatapi venhau. Donut yakaunzawo Power Control widget yekutarisa Wi-Fi, Bluetooth, GPS, nezvimwe.
Imwe yemafoni ayo akatengeswa neDonut akaisirwa yaive yakaipa-fated Dell Streak. Yakanga iine hombe (panguva iyoyo) 5-inch screen, uye yakatsanangurwa pane yedu saiti se "smartphone / piritsi." Mazuva ano, kuratidzwa kwe5-inch kunoonekwa kunge kudiki kune smartphone.
Muna Gumiguru 2009 - rinenge gore mushure mekuburitswa kweiyo Android 1.0 - Google yakaburitsa vhezheni 2.0 yeOS, iine official codename Eclair. Iyi vhezheni yaive yekutanga kuwedzera zvinyorwa-kune-kutaura rutsigiro, uye zvakare yakaunza mapikicha ehupenyu, yakawanda account account, uye Google Mepu yekufambisa, pakati pezvimwe zvakawanda zvinhu zvitsva uye kugadzirisa.
Motorola Droid yaive yekutanga foni yaitamba Android 2.0 kunze kwebhokisi. Iyo Droid yaivewo yekutanga Android-based foni yakatengeswa neVerizon Wireless. Mune chimwe chinonakidza che trivia, nepo Google yaive yakachengeteka kushandisa Android sezita reOS yayo, izwi rekuti "Droid" rakaratidzirwa naLucasfilm, zvichireva marobhoti e Star Wars kodzero. Motorola yaifanirwa kuwana mvumo uye kubhadhara imwe mari kuna Lucasfilm kuti ishandise zita rekuti foni yayo. Motorola yakaenderera ichishandisa iyo Droid brand kune mazhinji mafoni ayo kusvika gore ra2016.
Android 2.2 Froyo (ipfupi neiyo “chando yogati”) yakavhurwa zviri pamutemo muna Chivabvu 2010. MaFoniyo enharembozha anotora mukana pazvinhu zvitsva zvakawanda, zvinosanganisira Wi-Fi nharembozha hotspot mabasa, kusundira zviziviso kuburikidza neiyo Android Cloud kune Chidimbu Chekutumira (C2DM) sevhisi. , flash rutsigiro, uye nezvimwe.
Yekutanga smartphone yakatakura Google's Nexus branding - iyo Nexus One - yakavhurwa ne Android 2.1 kunze kwebhokisi pakutanga kwa2010, asi nekukurumidza yakagamuchira pamusoro-iyo-mhepo yekudzosera kuna Froyo gare gare iro gore. Izvi zvakaratidza nzira nyowani yeGoogle, nekambani iri kushanda padhuze nakare kose nemugadziri wehurdhiyo HTC kuratidza yakachena Android.
Android 2.3 Gingerbread yakavhurwa munaGunyana 2010. Iyo OS yakagamuchira mushandisi interface yekuvandudza pasi peGingerbread. Yakawedzera rutsigiro rwekushandisa padyo nemunda kutaurirana (NFC) mashandiro emafoni efoni ane inodiwa Hardware. Foni yekutanga kumitambo zvese Gingerbread uye NFC Hardware yaive iyo Nexus S, iyo yakabatana neGoogle neSamsung. Gingerbread yakaisawo hwaro hweiyo selfie nekuwedzera rutsigiro rwemakamera mazhinji uye rutsigiro rwekutaura kwevhidhiyo mukati meGoogle Talk.
Android 3.0 Zinga reuchi
Iyi vhezheni yeOS ingangove isinganzwisisike yeboka. Zinga rehuchi rakagadzirirwa mahwendefa uye zvimwe nharembozha ine hukuru hukuru. Yakatanga kuunzwa muna Kukadzi 2011, pamwe neye Motorola Xoom piritsi. Yaisanganisira maficha senge UI yakagadziriswazve makuru masikirini, pamwe neabha yekuzivisa yakaiswa pazasi pechiratidziro chepiritsi.
Pfungwa yaive yekuti Nyuchi yaizopa maficha aisakwanisa kubatwa nezvidiki zviratidziro zvakawanikwa pane mafoni panguva iyoyo. Yakanga iriwo mhinduro neGoogle uye nevamwe vayo vechitatu-bato kuburitswa kwa2010 kweApple's iPad. Kunyangwe Honeycomb yaivepo, mamwe mapiritsi aive achiri kuburitswa neiyo smartphone-based Android 2.x shanduro. Mukupedzisira, Honeycomb yakaguma yave vhezheni yeApple iyo isina kuona yakagamuchirwa. Google yakasarudza kubatanidza akawanda emaficha ayo mune yayo inotevera 4.0 vhezheni, Ice Cream Sandwich. Icho chidiki chekunze mune Android nhoroondo.
Yakaburitswa munaGumiguru 2011, iyo Ice Cream Sandwich vhezheni yeApple yakaunza huwandu hwezvinhu zvitsva. Iyo yaisanganisa yakawanda yesarudzo dzepiritsi-chete Honeycomb vhezheni neGingerbread inotungamirwa ne smartphone. Yaisanganisirawo "inofarira tereyi" pachikwangwani chekumba, pamwe nerutsigiro rwekutanga kuvhura foni nekushandisa kamera yayo kutora mufananidzo wechiso chemuridzi wayo. Rudzi irworwo rwebhiometric sign-in rutsigiro rwakashanduka uye rwakavandudza zvakanyanya kubva ipapo.
Dzimwe shanduko dzinozivikanwa neICS dzaisanganisira rutsigiro rwevose vari-pahwindo mabhatani, swipe zviito zvekudzinga zviziviso uye mabhurawuza, uye kugona kuongorora yako data kushandiswa pamusoro pe mobile uye Wi-Fi.
Iyo Jelly Bean nguva yeApple yakatanga munaJune 2012 nekuburitswa kweApple 4.1. Google yakakurumidza kuburitsa shanduro 4.2 uye 4.3 - ese ari maviri pasi peiyo Jelly Bean chitambi - muna Gumiguru 2012 uye Chikunguru 2013, zvichiteerana.
Zvimwe zvekuwedzera kutsva mune izvi software zvinogadziridza zvaisanganisira nyowani yekuzivisa maficha airatidza zvimwe zvemukati kana zviito mabhatani, pamwe nerutsigiro ruzere rweiyo Android vhezheni yeGoogle yeGoogle webhu browser, iyo yakaverengerwa mu Android 4.2. Google Now yakaitawo sechikamu cheKutsvaga, nepo "Project Butter" yakaunzwa kuti ikurumidze mifananidzo uye kuvandudza kubata kwekubata kweApple. Kunze Kunoratidza uye Miracast yakawanawo rutsigiro, sezvakaita HDR kutora mafoto.
Android 4.4 ndiyo yekutanga vhezheni yeOS iyo yainyatsoshandisa zita raimbotengeswa zita rechimasi. Isati yatanga zviri pamutemo munaGunyana 2013, kambani yakaburitsa mazano kumusangano wayo weGoogle I / O gore iro kuti codename yeApple 4.4 ingangove "Key Lime Pie." Chokwadi, vazhinji veGoogle timu yeGoogle yaifunga kuti ndizvo zvaizoitikawo futi.
Sezvazvakaitika, director weGoogle wepasi rose kudyidzana, John Lagerling, akafunga kuti "Key Lime Pie" haizove zita rinozivikanwa rekushandisa pasirese. Asi, akasarudza kuita chimwe chinhu chakasiyana. Akataurirana naNestle, ivo vagadziri vebhawa reKitKat, akavabvunza kana vaigona kushandisa zita rekuti Android 4.4. Nestle akabvuma uye KitKat yakave zita reiyo inotevera Android vhezheni. Kwaive kuyedza kushambadzira kuti Google haina kumutsazve kudzamara kuvhurwa kwaOreo (tichasvika kwazviri).
KitKat yakanga isina huwandu hwakawanda hwezvinhu zvitsva, asi yaive nechinhu chimwe chete chakanyatsobatsira kuwedzera musika wese weApple. Yakagadziridzwa kumhanyisa pamafoni efoni aive neashoma se512 MB ye RAM. Izvi zvakatendera vagadziri vefoni kuti vashandise yazvino vhezheni yeApple pane zvakachipa handsets. Google's Nexus 5 smartphone yaive yekutanga ine Android 4.4 pre-yakaiswa.
Kutanga kuburitswa mukudonha kwa2014, Android 5.0 Lollipop yaive hombe shakeup mukutarisa kwese kwese kwekushandisa system. Yaive yekutanga vhezheni yeOS iyo yaishandisa Google nyowani Nyowani Dhizaini mutauro. Yakagadzira yakasununguka yekuvhenekesa nemumvuri mhedzisiro, pakati pezvimwe zvinhu, kuteedzera pepa-senge tarisiro yeiyo Android mushandisi interface. Iyo UI yakawanawo zvimwe zvekuvandudza, kusanganisira yakagadziridzwa yekufambisa bar, zviyeuchidzo zvakapfuma zvechivhariro, uye nezvimwe zvakawanda.
Iyo inotevera Android 5.1 yekuvandudza yakaita mashoma mashoma pasi-iyo-hood shanduko. Izvi zvaisanganisira rutsigiro rwepamutemo rweviri-SIM, HD Inzwi inoshevedza, uye Kudzivirirwa kweMidziyo kuchengetedza mbavha dzakakiyiwa kunze kwefoni yako kunyangwe mushure mekugadziriswa kwepafekitori.
Google's Nexus 6 smartphone, pamwe neiyo Nexus 9 piritsi, ndiwo ekutanga maturusi kuve neLollipop pre-yakaiswa.
Yakaburitswa mukudonha kwa2015, Android 6.0 Marshmallow yakashandisa chinotapira chinofarirwa nevanoisa musasa sechiratidzo chikuru. Mukati, Google yakashandisa "Macadamia Nut Cookie" yeiyo Android 6.0 pamberi peyemutemo Marshmallow chiziviso. Iyo yaisanganisira maficha senge nyowani yakatwasuka yekumhanyisa dhizaini yedhizaini, pamwe neGoogle Zvino paTap, rutsigiro rwemuno rwechigunwe cheminwe biometric kuvhura, USB Type-C rutsigiro, kuiswa kweiyo Android Pay (ikozvino Google Pay), uye nezvimwe zvakawanda.
Midziyo yekutanga yakatumirwa neMarshmallow pre-yakaiswa yaive mafoni eNexus 6P neNexus 5X, pamwe nePixel C piritsi.
Shanduro 7.0 yeGoogle's mobile operating system yakatangwa mukudonha kwa2016. Nougat isati yaziviswa, "Android N" yakatumirwa mukati neGoogle se "New York Cheesecake." Nougat akawanda matsva maficha aisanganisira zvirinani kuwanda-kuita tasking mabasa enhamba iri kukura yemafoni efoni ane makuru maonesheni, senge split-screen mode, pamwe nekukurumidza kuchinjika pakati pemapurogiramu.
Google yakaita shanduko hombe kuseri kwezviitiko zvakare. Iyo yakachinjira kune nyowani JIT compiler kuti ikurumidze maapplication, yakatsigira iyo Vulkan API yekukurumidza 3D kupa, uye yakagonesa maOEMs kutsigira yazvino-isina basa Daydream VR chikuva.
Google yakashandisawo kuburitswa kuita kushinga kupinda mumusika wekutanga we smartphone. Yekambani pachayo Pixel uye Pixel XL, pamwe neiyo LG V20, ndivo vakatanga kuburitswa neNougat pre-yakaiswa.
Muna Kurume 2017, Google yakazivisa zviri pamutemo uye yakaburitsa yekutanga yekuvandudza muoni weiyo Android O, inozivikanwawo sekuti Android 8.0. Asati aburitswa, Hiroshi Lockheimer, mutevedzeri wemutevedzeri wemutungamiri weApple kuGoogle, akatumira GIF yekeke reOreo paTwitter - zano rekutanga rakasimba rekuti Oreo, cookie yakakurumbira, zvechokwadi ichava codename yepamutemo yeApple 8.0.
Muna Nyamavhuvhu, Google yakasimbisa zita reruzhinji-rakafemerwa veruzhinji reApple 8.0. Yakanga iri nguva yechipiri iyo kambani ikasarudza zita rine zita rekuti Android (Oreo ndeyaNabisco). Mukuzorora kubva mutsika yavo, Google yakaratidza iyo Android Oreo mascot chifananidzo kekutanga muchiitiko chevatori venhau muNew York City, panzvimbo pekumuzinda wayo weGoogleplex. Icho chifananidzo chinoratidzira iyo Android mascot segamba rinobhururuka, rakazara nekapa. Chifananidzo chechipiri chakaiswa panzvimbo huru yeGoogle gare gare musi iwoyo.
Kusvika pazvinhu zvinoenda, Android Oreo yakarongedzwa mune dzakawanda zvekuchinja shanduko kuMenu yeMenu, pamwe nerutsigiro rwemuno rwepikicha-mu-pikicha modhi, zviteshi zvekuzivisa, matsva ekuzadza maAPI ekugadzirisa zvirinani mapassword uye zadza data, uye zvimwe zvakawanda. Android Oreo yakatanga kuuya yakaiswa pa Google yega Pixel 2 mafoni.
Google yakatanga chirongwa chekutanga chekuvandudza chinotevera chikuru Android inovandudzwa, Android 9.0 P, munaKurume 7, 2018. Musi waNyamavhuvhu 6, 2018, kambani yakaparura zviri pamutemo vhezheni yekupedzisira yeApple 9.0, ichiipa zita repamutemo re "Pie".
Android 9.0 Pie yaisanganisira akati wandei makuru maficha maficha uye shanduko. Mumwe wavo akadonhedza mabhatani echinyakare mabhatani achifarira bhatani rakareba riri pakati, iro rakava bhatani idzva remusha. Kusvetuka kubva pairi kunounza Ongororo, nemaapps ako achangoshandiswa, bhawa rekutsvaga, uye mashanu mazano eapps pazasi. Unogona swipe kuruboshwe kuti uone ako ese achangobva kuvhurwa maapp, kana iwe unogona kudhonza bhatani repamba kurudyi kuti nekukurumidza scroll kuburikidza nemaapp
Android 9.0 Pie zvakare yaisanganisira zvimwe zvinhu zvitsva zvakagadzirirwa kubatsira kuwedzera hupenyu hwebhatiri reApple. Izvo zvakawanikwa nekushandisa kwe - -muchina wemuchina kudzidza iyo inofungidzira kuti ndeapi maapplication auchazoshandisa izvozvi, uye ndeapi maapplication ausingazoshandisa kusvika gare gare. Pie zvakare ine Shush, chimiro chinongoerekana chaisa foni yako muDe not Disturb mode paunofuratira yako foni screen pasi pane yakati sandara pamusoro. Kune zvakare Zvimedu, izvo zvinopa diki vhezheni yeakaisirwa app mukati meGoogle Tsvaga, ichipa mamwe maapplication mabasa pasina kuvhura iyo yakazara application.
Semazuva ese, Android 9.0 Pie yaiwanika kutanga zviri pamutemo kumafoni eGoogle ePixel, asi yakatangawo pa Essential Phone panguva imwe.
Makore gumi mushure mekuburitswa kweOS, takawana imwe huru nhoroondo yeiyo Android nhoroondo. Google yakatanga chirongwa chekutanga chemuvambi cheiyo Android Q, munaKurume 10, 13. Musi waNyamavhuvhu 2019, 22, Google yakazivisa a kukurudzira kukuru kweiyo Android brand. Izvo zvaisanganisira logo nyowani uye, zvinotonyanya kukosha, sarudzo ye gomba zita rechinyakare dhizeti yeiyo inotevera vhezheni. Nekuda kweizvozvo, Android Q inozivikanwa zviri pamutemo senge Android 10. Yakavhurwa zviri pamutemo munaGunyana 3, 2019, yeGoogle's Pixel zvishandiso.
Semazuva ese nechero nyowani Android kuburitswa, Android 10 yaive nezvakawanda zvitsva maficha uye kugadzirisa, pamwe nenhamba dzinoverengeka dzeAPIs. Izvo zvaisanganisira rutsigiro rwekumhanyisa kwekuzo-kuuya mafoni anokundwa. Android 10 yakaunzawo system-wide rima modhi, pamwe neiyo nyowani-yekufambisa-yekudzora kutonga, inowirirana yekugovana menyu, smart mhinduro maficha eese mameseji maapplication, uyezve kutonga pamusoro peapp-based mvumo.
Credit: Joe Hindy / Android Chiremera
Musi waFebruary 18, Google yakaparura yekutanga Developer Ratidziro yeApple 11. Mushure mekubuditswa kwakawanda kwevanhu betas, vhezheni yekupedzisira yeApple 11 yakavhurwa munaGunyana 8, 2020.
Android 11 yasvika iine zvakawanda zvezvinhu zvitsva. Izvo zvinosanganisira nyowani Yekukurukurirana ziviso yechikamu uko kwako kwese chats kubva kwakasiyana maapplication anounganidzwa munzvimbo imwechete. Iwe zvakare une sarudzo yekusevha ziviso yega yega yakaonekwa pafoni yako mumaawa makumi maviri nemana apfuura. Chinhu chitsva chinokuita kuti utore skrini yefoni yako, izere neodhiyo, pasina kuda yechitatu-bato app. Kune zvakare chikamu chitsva che Android 24 yakatsaurwa kudzora smart smart zvishandiso.
Read more: Yakanakisa Android 11 maficha iwe aunofanirwa kuziva
Pixel mafoni, zvisinei, ari kuwana iyo Android 11 yakasarudzika ficha. Iyo inoshandisa AI uye muchina kudzidza kudzora kuti ndeapi maapplication anoonekwa padoko refoni yako.
Google yakakwidza chinyakare chifananidzo chekupemberera kuvhurwa kweApple 11, asi zvakare yakaburitsa AR vhezheni yechifananidzo kune ese Android ARCore mafoni. Iyo ine kunyange akati wandei eIsita Mazai, kusanganisira karesipi yekugadzira tsvuku velvet keke. Izvo zvakare zvinoitika kuve remukati kodhi yekodhi yeiyo OS kuGoogle.
Android yauya nzira refu kubva payakazvininipisa kutanga sechigadzirwa cheshoma kutanga-kumusoro. Nhasi, ndiyo inotungamira nharembozha inoshanda sisitimu pasirese neinosvika 75% yemugove wemusika.
Kambani yeMountain View ichiri yakazvipira zvakanyanya kusimudzira kuvandudzwa kweApple, kunyange paine zviratidzo kuti zvirongwa zvenguva refu zvinogona kuwedzera kure kure.
Android inoenderera ichienda kubva pasimba kuenda pasimba, asi pane zvinetswa kumberi.
Google yanga ichishanda kwemakore mashoma apfuura pamatanho eOS-nyowani inonzi OS Fuchsia izvo zvinogona kutsigira zvese kubva kumafoni efoni kuenda kune mapiritsi, uye kunyangwe notibhuku uye desktop PC. Muna 2019, Google yakatanga bhodhi rekuvandudza saiti yeFuchsia. Nekudaro, isu tichiri zvakanyanya murima nezve zvirongwa zveGoogle zveiyi OS. Izvo zvinoramba zvichionekwa kana Fuchsia ichizomborova zvakanyanya kana kuve yakasiya basa kumakuva eGoogle pamwe nemamwe akawanda mapurojekiti.
Zvichakadaro, Android inoenderera ichienda kubva pasimba kuenda pasimba - kunyangwe paine matambudziko padhuze.
Credit: David Imeri / Android Chiremera
Nhoroondo yeAroid yakatarwa pamwe nekudzokororwa kuburitswa yakagadziridzwa nekuda kwemaitiro akaita se Project Treble uye Project Mainline, asi kupatsanurwa kuchiri kunetsekana. Saizvozvowo, nepo makambani akaita seSamsung neOnePlus vakazvipira kupa makore matatu ekuvandudza kweOS uye ekuchengetedza ekuvandudzwa kwemazhinji emafoni avo, kune akawanda maOEMs achiri kupedzisa rutsigiro makore maviri kana kunyangwe gumi nemaviri chete mwedzi.
Mutakuri weGoogle weApple - iyo Google Pixel nhepfenyuro - inoramba ichipatsanura vatsoropodzi nevatengi, asi kunetsekana chaiko ndiko kuwedzera kwekuyedza fomu zvinhu kubva kune vamwe vanogadzira mafoni - mafomu mafomu anotambanudza miganho yeanogona eazvino Android. Mafaira akapetwa uye maviri-e-screen mafoni anogona kunge ari chikamu chevasina nematengo emutengo wepamusoro uye niche yekukwezva, asi ivo vatove vakafumura kushomeka kweAroid seOS yemasikisi akakura escreen.
Kunyangwe zvingangoda kuchinjika zvekare kune iyi nyowani dhizaini yedhizaini dhizaini, zvinoita kunge zvine musoro kufanotaura kuti Android ichaenderera ichitonga nharembozha OS musika. OS iri kuiswa pamafoni anotengeswa zvisingasviki zana remadhora, nzira yese kumidziyo inodhura yemureza inodhura inodarika $ 100 1,000. Iko kushanduka, pamwe chete nekuvandudzwa kwegore, kunofanirwa kuona kuti Android icharamba iri mutungamiri muindasitiri iyi kwemakore anouya.
Iyo yakanakisisa yemitambo yeIndaneti isina kuwanikwa mu2017: edza izvi kunze ikozvino
Maitiro ekuvheneka nzira yakasviba muGoogle apps (Dzosera: Iye zvino kusanganisira mamwe maapuro)
Google Pixel 5 ongororo: Iyo yakanakisa Pixel nakare
Ultimate Guide pamusoro pekuona nekutevera nhamba yefoni
Iyi mitambo yeApple inotsigira vatongi veBluetooth uye ivo vari nani kwairi